သင့်လက်ကို ဂရုစိုက်ခြင်း - လိုက်နာရန် အကောင်းဆုံးအဆင့်များ | Bezzia
သင့်လက်ကို ဂရုစိုက်ရန် ရိုးရှင်းသောအဆင့်များ
Susana godoy | | လှပမှု
လက်ကို ဂရုစိုက်ခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံး အဆင့်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ပေးရမှာ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒါက ငါတို့ရဲ့ ကာဗာရေးစာလည်း ဖြစ်သလို၊ ထို့ကြောင့် သပ်ရပ်သောလက်များသည် အလှတရားနှင့် တူညီသည်။ အကြောင်းရင်းများစွာနှင့် အမြဲထိတွေ့နေရသော်လည်း သူတို့လိုအပ်သော စောင့်ရှောက်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ပေးပါမည်။
ထို့ကြောင့် ထိုသို့သောစောင့်ရှောက်မှုကို လိုက်နာသည့်အခါ ပိုမိုတိကျသောအဆင့်များ လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် သင့်တွင် လိုအပ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် အပ်နှံချိန်လည်းရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် အမြန်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်မပူပါနှင့်။ လောင်းကြေးထပ်ချင်ရင် ပိုလှတယ်၊ နူးညံ့ပြီး ဂရုစိုက်တဲ့လက်ဒါဆိုရင် နောက်ဖြစ်လာမယ့်အရာကို လက်လွတ်မခံပါနဲ့။
1 သင့်လက်ကို ဂရုစိုက်ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ exfoliation ပါ။
2 သင့်လက်အတွက် စတော်ဘယ်ရီနှင့် ဒိန်ချဉ်
3 သင့်လက်ကို နက်ရှိုင်းစွာ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပါ။
4 အရမ်းပူတဲ့ရေ မသုံးပါနဲ့။
6 အိမ်မှာ လက်အိတ်ဝတ်ပါ။
သင့်လက်ကို ဂရုစိုက်ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ exfoliation ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရေပြားသည် ရံဖန်ရံခါ တောင်းဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ full-blown exfoliation. ကောင်းပြီ၊ ဤကိစ္စတွင်လျော့နည်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပါးလွှာတဲ့အသားအရည်ရှိလို့ လက်တွေက အလိုအပ်ဆုံးသူတွေပါ။ ထို့ကြောင့် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် ၎င်းတို့ကို လောင်းကစားနိုင်ကြောင်း သတိရပါ။ exfoliate လုပ်ရန် သင်သည် သီးခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုပေါ်တွင် လောင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင်သကြား သို့မဟုတ် ဆားနှင့်ရောစပ်နိုင်သော အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်အနည်းငယ်ကို လောင်းနိုင်သည်။ ကောင်းစွာရောစပ်ပြီး လက်ကို နှိပ်နယ်ပေးရုံဖြင့် လုံလောက်သည်ထက် ပိုနေပါလိမ့်မည်။ ပြီးရင် ကောင်းကောင်းဆေးကြောပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ moisturizer လိမ်းပေးပါ။
သင့်လက်အတွက် စတော်ဘယ်ရီနှင့် ဒိန်ချဉ်
၎င်းကို exfoliant အဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ၎င်းတို့သည် hydrant သို့မဟုတ် အာဟာရရှိသော ရွေးချယ်မှုအဖြစ်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သူမအတွက်၊ သင်သာလိုအပ်သည်။ စတော်ဘယ်ရီသီး ၄ လုံးခန့်ကို ကြိတ်ချေပြီး ဒိန်ချဉ် စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်းခန့် ထည့်ပါ။ သဘာဝအတိုင်းလုပ်ပါ။ အရောအနှောတွေရပြီဆိုရင်တော့ လက်တွေအားလုံးကို နှိပ်နယ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ပျော့ပျောင်းမှုက ကြီးကျယ်တဲ့ ဇာတ်ဆောင်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာကို သတိထားမိမှာပါ။ ထို့နောက် ရေဖြင့် ဖယ်ရှားပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးရန် moisturizer အနည်းငယ် လိမ်းနိုင်ပါသည်။
သင့်လက်ကို နက်ရှိုင်းစွာ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပါ။
exfoliation က အရေးကြီးရင် ရေဓာတ်လည်း မကျန်တော့တာတော့ သေချာပါတယ်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် moisturizer လိမ်းခြင်းသည် အသုံးဝင်ရုံသာမက အိမ်သုံးကုထုံးများကိုလည်း ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ သင်လုပ်ရမယ်။ ထောပတ်သီးတစ်ဝက်ကို ထောင်းထားပါ။. ဒီအတွက် ပျားရည်တစ်ဇွန်းထည့်ကာ အရောအနှောကို လက်ဖြင့် လိမ်းပေးလိုက်ပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် ထားပြီး ရေနဲ့ ဖယ်လိုက်ပါ။ အသားအရေ နူးညံ့လာတယ်ဆိုတာ သေချာပေါက် သတိထားမိမှာပါ။
အတွေ့ရများဆုံး အဆင့်များထဲမှ နောက်တစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်တို့ အလွယ်တကူ မေ့ပျောက်နိုင်သော အဆင့်တစ်ခုမှာ ဤအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ လက်ကို အရမ်းပူတဲ့ရေ မသုံးတာ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး။ ကျန်တဲ့ အရေပြား နဲ့ ၊ ပိုမြန်မြန်ခြောက်သွေ့သွားနိုင်ပါတယ်။. ဒါကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွေအတွက် ကုစားနည်းတွေကို သင်ရှာနေတယ်ဆိုရင် ဒါက ကျွန်တော်တို့နဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။ အရေပြားအမျိုးအစားတစ်ခုစီတိုင်းကို အများဆုံးဂရုစိုက်ရန် ရေနွေးနွေးနှင့် သန့်စင်သော သို့မဟုတ် သီးခြားဆပ်ပြာများကို အမြဲသုံးပါ။
ထိုအရာအားလုံးဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်များ ပျော့ပျောင်းလာမည်ကို သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပေ။ ဒါပေမယ့် အပိုအကူအညီအသစ်တွေကို လိုချင်ရင် ရောနှောဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကို ပြောပြပါမယ်။ ဆီအနည်းငယ်နှင့် ကြက်ဥအနှစ် ဗာဒံစေ့ (သို့) မင်းအိမ်မှာ နဲ့ မင်းကြိုက်သမျှ သင်က ၎င်းကို အသုံးချပြီး အလုပ်ဖြစ်ရန် အနည်းငယ်စောင့်ပါ။ ထို့နောက် ဖယ်ရှားလိုက်သောအခါတွင် ဤပါဝင်ပစ္စည်းများ နှစ်ခု၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် သင့်အသားအရေသည် ပုံမှန်ထက် များစွာ ချောမွေ့နေသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်အိတ်တွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ အိမ်မှာဝတ်တဲ့ လက်အိတ်တွေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့မထင်သောကြောင့်၊ သို့သော် သန့်စင်ရေးထုတ်ကုန်များကို ထိတွေ့မိသောအခါတွင် ၎င်းတို့၏ဓာတုပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် အရေပြားသည် အက်ကွဲလာပြီး ပိုမိုထိခိုက်လွယ်လာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, အဲဒါကို အမြင့်ဆုံးအထိ ဂရုစိုက်ရမယ်။အရာရာတိုင်းက အမြဲတမ်း ပိုကောင်းတယ်။ လက်တွေကို ဖယ်ရှားပြီးတာနဲ့ လက်ကို အမြဲဆေးကြောပြီး လက်အိတ်အသုံးပြုရတာ အနည်းငယ်ကြမ်းတမ်းလာပါက ခရင်မ်အနည်းငယ် လိမ်းနိုင်ပါတယ်။ လက်ကို ဂရုစိုက်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » သင့်လက်ကို ဂရုစိုက်ရန် ရိုးရှင်းသောအဆင့်များ
ဆောင်းရာသီအတွက် အဖြူအမည်း စတိုင်များ
လက်သည်းတိုများအတွက် Manicure စိတ်ကူးများ